Usoro ọrụ - ndị na -ege ntịNdị ọrụ nke ndị na -ege ntị na -ege ntịGain
1. Nzube na oke nchịkọta
Isi nchịkọta data na Ndị na-ege ntị weebụsaịtị gụnyere: aha, email, akara ekwentị, adreesị. Nke a bụ ozi anyị chọrọ ndị ahịa ịnye mgbe ị na-edebanye aha na akaụntụ ma zipụ ndụmọdụ kọntaktị na iwu iji hụ ọdịmma ndị ahịa.
Ndị ahịa ga-ahụ naanị maka nzuzo na nchekwa nke ọrụ niile site na iji ọrụ n'okpuru aha ha debara aha, paswọọdụ na igbe email. Tụkwasị na nke a, ndị ahịa nwere ibu ọrụ nke ngwa ngwa ịgwa anyị banyere ojiji na-enweghị ikike, mmegbu, mmebi nchebe, ma debe aha na paswọọdụ nke atọ iji mee ihe iji dozie. dabara.
2. Akụkụ nke iji ozi
Anyị na-eji ozi ndị ahịa anyị nyere:
- Inye ndị ahịa ọrụ na ngwaahịa;
- Zipu amamọkwa banyere ọrụ nkwukọrịta n'etiti ndị ahịa na Ndị na-ege ntị website.
- Gbochie mmemme nke ibibi akaụntụ ndị ahịa ma ọ bụ omume ndị na-eme ka ndị ahịa;
- Kpọtụrụ ma dozie ndị ahịa na ikpe pụrụ iche
- Ejila ozi nkeonwe nke ndị ahịa na-abụghị nzube nke nkwenye na kọntaktị metụtara ya na weebụsaịtị Ndị na-ege ntị.
- Bụrụ na nke iwu chọrọ: anyị na-ahụ maka-ekwenyere na-enye nke ozi nkeonwe na ndị ahịa n'elu arịrịọ si ikpe ụlọ ọrụ, na nsonye: Procuracy, n'ụlọikpe, uwe ojii nyocha metụtara a ụfọdụ iwu mebiri nke ndị ahịa. Na mgbakwunye, ọ nweghị onye nwere ikike imebi ozi nkeonwe nke ndị ahịa.
3. Oge nchekwa ozi
- A ga-echekwa data nke ndị ahịa ruo mgbe enwere arịrịọ ịkagbu. Nọgide na-echekwa ozi nkeonwe nke ndị ahịa ga-ezobe ya na sava weebụ. Ọ bụrụ na a na-enyo ozi nkeonwe ịbụ adịgboroja, emebi iwu ma ọ bụ na enweghị mmekọrịta nbanye maka ọnwa 6, a ga-ehichapụ ozi dị otú ahụ.
4. Ndị mmadụ ma ọ bụ òtù nwere ohere ịnweta ozi ahụ
Ozi anyị rịọrọ ndị ahịa n'oge ị na-agba izu na ịtụ ahịa ga-eji naanị ihe nke 2 nke Iwu a. Gụnyere nkwado ndị ahịa na ịnye ndị ọchịchị ikike mgbe achọrọ.
Tụkwasị na nke ahụ, a gaghị ekpughere ndị ọzọ ọzọ ozi ahụ na-enweghị nkwenye nke onye ahịa ahụ.
5. Adreesị nke ngalaba na-anakọta ma jikwaa ozi nkeonwe
Lọ ọrụ: Ndị na-ege ntị na Marketinglọ Ọrụ Na-ere Ọrụ na Limited
Adreesị: Mba. 19 Nguyen Trai, Khuong Trung Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City, Vietnam
6. anszọ na ngwaọrụ maka ndị ọrụ iji nweta ma dozie data nkeonwe ha.
- Ndị ahịa nwere ike izigara anyị arịrịọ maka enyemaka na ịlele, imelite, mezie ma ọ bụ kagbuo ozi nkeonwe ha.
- Ndị ahịa nwere ikike itinye akwụkwọ mkpesa gbasara ngosi nke ozi nkeonwe na ndị ọzọ na ndị otu njikwa nke weebụsaịtị. Mgbe ị na-anabata azịza ndị a, anyị ga-ekwenye na ozi ahụ, ga-abụrịrị ọrụ maka ịzaghachi ihe kpatara ya ma duzie ndị otu iji weghachite ma chekwaa ozi ahụ.
7. Nkwa maka ichedo ozi nkeonwe nke ndị ahịa
- Ozi nkeonwe nke ndị ahịa na weebụsaịtị a na-etinye aka na nzuzo zuru oke dịka iwu nchekwa ozi gbasara onwe onye akọwapụtara. Nchịkọta na ojiji nke ozi ndị ahịa nwere ike na-arụ ọrụ na nkwenye nke ndị ahịa ahụ, belụsọ na iwu enyere ya.
Anyị na-eji Secure Sockets Layer (SSL) sọftụwia iji chebe ozi ndị ahịa n'oge mbufe data site na encrypting ozi ị tinyere.
- Ndị ahịa nwere ọrụ maka ichebe onwe ha pụọ ​​na ozi paswọọdụ mgbe ha na ọtụtụ mmadụ na-ekerịta kọmputa. N'oge ahụ, Onye Ahịa ahụ ga -rịrịrịrịrị ịpụ na akaụntụ ahụ mgbe ị jesịrị ọrụ anyị
- Anyị na-agba mbọ ka anyị agaghị ama ụma na-ekpughe ihe ọmụma ndị ahịa, ọ bụghị ire ma ọ bụ ịkekọrịta ozi maka ebumnuche azụmahịa.
A na-etinye iwu nchebe ozi ndị ahịa na weebụsaịtị anyị. Ọ naghị agụnye ma ọ bụ metụta ndị ọzọ ndị ọzọ iji tinye mgbasa ozi ma ọ bụ nwee njikọ na weebụsaịtị.
- Ọ bụrụ na onye ọrụ hacker wakporo sava ozi ahụ nke na-akpata ọnwụ nke data ndị ahịa, anyị ga-ahụ maka ịgwa ndị ọrụ nyocha ka ha mee ngwa ngwa ma gwa onye ahịa ahụ. Amara.
- managementlọ ọrụ nchịkwa chọrọ ka ndị mmadụ kpọtụrụ, iji nye ozi nkeonwe dị mkpa dịka: Aha zuru ezu, nọmba ekwentị, kaadị ID, email, ozi ịkwụ ụgwọ ma buru ibu maka iguzosi ike n’ezi ihe Nkwenye nke ozi ahụ dị n’elu. Ndi Nduzi ndi oru adighi ajuju ma obu dozie mkpesa nile banyere ihe ndi ahia a choro ma oburu na ha chere na ihe omuma nile enyere na ndebanye aha mbu adighi nma.
8. Usoro maka nnata na idozi mkpesa metụtara ozi nkeonwe
Mgbe ndị ahịa nyefere anyị ozi nkeonwe anyị, ndị ahịa ekwenyela na usoro ndị anyị depụtara n'elu, anyị na-agba mbọ ichebe nzuzo nke ndị ahịa n'ụzọ ọ bụla enwere ike. Anyị na-eji sistemụ zoro ezo iji kpuchido ozi a site na iji weghachite, ojiji ma ọ bụ nkwupute na-enwetaghị ikike.
Anyị na-atụ aro ka ndị ahịa debe ozi nzuzo metụtara paswọọdụ ha ma ghara ịkọrọ onye ọ bụla ọzọ.
N'ihe banyere nzaghachi ndị ahịa na iji ozi emegide nzube ahụ ekwupụtara, anyị ga-aga n'ihu na usoro ndị a:
Kwụpụ 1: Ahịa na-eziga nzaghachi na ozi nkeonwe anakọtara megidere nzube a kwuru.
Nzọụkwụ 2: Ngalaba Nlekọta Ndị Ahịa na-anata ma na-emekọ ihe metụtara ndị ọzọ.
Kwụpụ 3: Ọ bụrụ na anyị achịkwaghị achịkwa, anyị ga-ewepụta ndị ikike ruru eru ịrịọ mkpebi.
Anyị na -anabata nkwupụta, kọntaktị na nzaghachi sitere n'aka ndị ahịa gbasara “amụma nzuzo” a. Ọ bụrụ na ndị ahịa nwere ajụjụ ọ bụla, biko kpọtụrụ Email: [email protected]